Musharaxiinta Jubbaland Oo Ka Soo Horjeestay Dalab Uu Gudbiyay James Swan -News and information about Somalia
Home News Musharaxiinta Jubbaland Oo Ka Soo Horjeestay Dalab Uu Gudbiyay James Swan
Musharaxiinta Jubbaland Oo Ka Soo Horjeestay Dalab Uu Gudbiyay James Swan
Musharaxiinta u taagan qabasha xilka Madaxweynaha dowlad Goboleedka Jubbaland ee Is diiwaangeliyay ayaa ka horjeestey dalab Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James swan u gudbiyay Madaxda maamulka Jubbaland.
James swan oo shalay Magaalada Kismaayo kula kulmay Madaxweynaha Jubbaland ayaa Codsaday in waqti kordhin lagu sameeyo Is diiwaangelinta Musharaxiinta Madaxweynaha si ay isugu Diiwaangeliyaan Musharaxiinta aan weli is diiwaangelinin.
Musharaxiinta Jubbaland ayaa sheegay in aad uga xun yihiin in Guddiga Doorashooyinka aysan wax tixgelin ah dheeri ah siinin Musharaxiinta,isla markaana ay ku mashquulsan yihiin howlo kale oo dan u aheyn geedi socodka Doorashada.
War-saxaafeed ka soo baxay Kudlada musharixiinta Madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa ay ku sheegeen in marna aysan aqbali doonin in dib loo furo Is diiwaangelinta Musharaxiinta,iyagoo xusay in Guddiga iyo Maamulka Jubbaland ay danno gaar ah ka leeyihiin howlasha Doorashada.
Hoos ka Akhriso War-saxaafeedka Kudlada musharixiinta Madaxweynaha Jubbaland.
Previous articleWasiirka Maareeye: “Somalia oo sheegtay inay heystaan culeyso Caalami ah” DHAGEYSO
Next articleIlhaan Cumar maxay kaga jawaabtay tallaabada Israa’iil ay qaaday?